I-5 yezona zibini zam zithandwayo zidumileyo kuncwadi | Uncwadi lwangoku
Usuku lukaValentine ulapha kwakhona. Iintliziyo, iiroses, izipho, i-champagne, izidlo zothando kwaye, ewe, kuninzi uthando. Phakathi kwezo zipho kunokuba yincwadi elungileyo, ukuba kunokwenzeka olo thando njengophambili. Ke ngenxa yemimoya yothando ephuphumayo namhlanje, ndiyayenza mi Ukukhetha kwe5 yabantu abathandanayo edume kakhulu kuncwadi. Zezi:
1 Ulysses kunye noPenelope
3 UCatherine Earnshaw kunye noHeathcliff
4 UJane Eyre kunye no-Edward Rochester
5 UMarianne Dashwood kunye noColonel Brandon
Ulysses kunye noPenelope
Ndiqala ngeklasikhi endala njengesiGrike Homer. Iya kuba kungenxa yokuba ndifanele ukuguqulela iinxalenye ze Iliad kunye I-Odisea Kwisikolo sam samabanga aphakamileyo nakwimfazwe yasekholejini kunye nommeli. Okanye ngenxa yokuba kubuntwana obukude kakhulu ukuba indawo yolonwabo ye I-Ulysses-31 ushiye uphawu kwintsomi. Inyani yile yokuba ii-Ulysses Ndandihlala ndimthanda. Ibiyi ubuqili kunye noMacavellian ukuba i-bombastic kunye ne-Achilles okanye i-Héctor de la Iliad.
Ndiyithandile indlela yakhe enobungozi ukuze abuyele e-Ithaca ngaphezulu kweemfazwe kunye namahashe eTrojan. Ndaye ndachukumiseka kukubona inkosikazi yakhe uPenelope esenza kwaye ehlehlisa oko wayekulukile kweso saluka Ngelixa uzama ukuphelisa iimpukane ezininzi zisebenzisa ithuba lokungabikho ko-Ulises ohluphekileyo. Ke ndonwabile ngovuyo olufanayo ukubuya kwabo kunye nokunyanzela kwabo ekuthumeleni bonke ngokungathandabuzekiyo.
Elona bali lothando likhulu nelibuhlunguabanye bathi. UTHANDO ngoonobumba abakhuluyitsho abanye. I-bard yesiNgesi eyayicinga ngaye yayenza ngendlela enkulu, njengazo zonke iimvakalelo awazibhalayo ukuba ziboniswe eqongeni. Uthando olugqithisileyo lomncinci kunye nothando lokuqala ngokuchasene nenkcaso yeentsapho ezingahambelaniyo ngonaphakade.
Umzabalazo ongalinganiyo weemvakalelo ezimsulwa ngokuchasene nehlabathi liphela elithetha indalo yakhe encinci yeeCapulets neMontagues. Kwaye i umbingelelo wokugqibela ukungayeki ukuziva kwaye kuba ukulahleka kwakhe kuthetha isiphelo sayo yonke into. Ngenxa yokuba ungaphantsi komntwana ofikisayo (kwaye nabani na oziva eyazi) ukuba uTHANDO alunamida okanye mida, yahlukile kwaye kubonakala ngathi iya kuhlala ngonaphakade. Iguqulelwe kaliwaka, mhlawumbi lelona bali lothando lwanaphakade.
UCatherine Earnshaw kunye noHeathcliff
Awu, uVictorian uthanda. Abantu baseSaxon badume phlegmatic, kunye nekhaka elinamandla elenzelwe ixesha elide ukuze igazi labo libile ngokwaneleyo. Akukho nto inokuthi iqhubeke nenyaniso, nangona inyani kukuba bahlala bekhohlisa thina. Kodwa xa bethatheka yiminqweno, BAYAZIBEKA. UShakespeare nabanye abaninzi babesele bekwenzile. Kodwa ngenkulungwane yeshumi elinesithoba igagasi Ukuthandana kungene iYurophu kumkhuhlane wothando olungenakulinganiswa kunye nothando. Kwaye iiSaxon zarhaxwa nakuzo.
Izidalwa ezinje oodade baseCharlottebanikwe italente enqabileyo, badala izinto ezinjengoCatherine Earnshaw kunye noMnu Heathcliff (iwuthering Heights, de Emily), okanye uJane Eyre kunye no-Edward Rochester (UJane Eyre, de Charlotte). UCathy EarnshawNdiyazidla kwaye ndiyazingca, awusoze uphephe olona thando luthandekayo Ngamandla amakhulu endalo esendle njenge Nguyen. Kwaye bayalihlonela ilizwi lokungakwazi ukuhlala kunye nawe okanye ngaphandle kwakho. Kude kubezekupheleni.
UJane Eyre kunye no-Edward Rochester
Kungathatha amagama amaninzi kakhulu ukuthetha ngesi sibini. Benza ngcono.
Ngaba ucinga ukuba ndingahlala apha ukuba andithethi nto kuwe? Ngaba ucinga ukuba ndiluhlobo lwe-automaton, umatshini ongenazo iimvakalelo onokuhlala ngaphandle kwesiqwenga senyama okanye ithontsi lamanzi? Ngaba ucinga ukuba ngenxa yokuba ndihlwempuzekile, ndithule, ndinengqondo kwaye ndincinci, ndikwangumntu ongenantliziyo nomphefumlo? Ewe, uphosisile: umphefumlo wam uyinyani njengowakho, injalo nentliziyo yam! Kwaye ukuba uThixo ebendinike ubuhle obuncinci kunye nemali eninzi, ngeyenze kwanzima kuye ukuba andishiye njengoko kunjalo nangoku kum ukuba ndimshiye. Andithethi ngamasiko, okanye ngokusesikweni, nditsho nakwinyama efayo: ngumoya wam ophethukela kuye, ngokungathi bobabini sele bewele umda wokufa kwaye bazifumana belingana phambi koThixo. Kungenxa yokuba yile ndlela esiyiyo, efanayo! ».
«Emva kokuba ulutsha lutshonile kwezona nkxwaleko okanye kwesona sithukuthezi sigqibeleleyo, ekugqibeleni ndafumana umntu endimthanda ngokwenene. Ndikufumene… Ungumphefumlo wam, ukulunga kwam, yingelosi yam; Ndimanyene nawe ngebhondi engenakuqhawuka. Ndicinga ukuba ulungile, unesidima kwaye uyathandeka. Umnqweno ovuthayo ovuthayo entliziyweni yam kukwenza ube liziko lobomi bam kwaye ubusongele ubukho bam malunga nabakho, amadangatye asitshisa emlilweni de sidibane sibe sinye ».
Ngaba amanye amagama ayafuneka? Andicingi. Eli libali lothando elineminye imibono emininzi umntu anokuyilungela ngenxa yesizathu asithandayo, esimfaneleyo okanye esinomdla kuye kakhulu. Kodwa into ebaluleke ngaphezu kwako konke luthando.
UMarianne Dashwood kunye noColonel Brandon
Zenziwe lelinye inenekazi lothando lweVictorian: UJane Austen yeyakho Ukuziva kunye novakalelo. Uye wathelekisa ukuzibamba kunye nokuqiqa ngothando kunye nokungenangqondo koodade uElinor noMarianne Dashwood. Kwaye wongeze imeko engathandekiyo yendawo elahlekileyo yentlalontle kunye nabafana abangalunganga abathi, ekugqibeleni (khumbula, lelinye ibali lothando) babe ngabalungileyo.
Kwaye ndikhetha gqamisa uMarianne onomdla ngaphezu kwengqiqo Elinor. Mhlawumbi ngenxa yokuba ndinokuchonga ngakumbi ngo-Elinor, kodwa ndiyazi ukuba ngokwenyani ndingazivumela ukuba ndithathelwe zezona zinto zimfamekisayo. UMarianne uyakhwankqiswa kwaye ukhohliswe unomdla kwaye ulilize Mnu willoughby. Kodwa phaya, emthunzini, ethule, enesineke, enyamezele kodwa eqhubeka, ngqo brandel colonel. Ubulumko bakhe kunye nobubele bakhe buphelisa ukuthotywa kakubi kukaMarianne kunye nokuphumelela kwentliziyo yakhe.
La Inguqulelo yefilimu entle otyikityo Ang Lee ngo-1995 ukuthanda kwam uBrandon kuye kwanda. Ngokuqinisekileyo ngenxa yokuchazwa kwaloo mdlali obalaseleyo kwaye omangalisayo owayenguye UAlan Rickman. Kwaye naye ndiyagqibezela.
Kwaye ngoobani amaqabane akho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » I-5 yezibini zam ezithandwayo zothando kuncwadi